Bonsai yeGnome-centric yakawanda-chishandiso sync basa | Linux Vakapindwa muropa
Christian Hergert, mugadziri weRed Hat uyo akashanda muGnome Builder yakavandudzwa nharaunda yekusimudzira, yakaunza chirongwa chitsva chekutyaira chinonzi "Bonsai" izvo ine sekutarisa kukurul mhanya se mhinduro kudambudziko rekuyananisa zvirimo mumidziyo dzakasiyana siyana uchishandisa Gnome.
Vashandisi vanogona kushandisa Bonsai kubatanidza akawanda Linux zvishandiso pane yavo yekumba network pavanoda kuwana mafaera uye data rekushandisa pane ese makomputa, asi havadi kuendesa yavo data kune wechitatu-bato gore masevhisi.
Bonsai inofanira kushanda yakafanana neyakavanzika gore.
Bonsai daemon uye raibhurari yakagovaniswa yekupa uye kupedza wega wega-sevhisi sevhisi. Vanotarisirwa vateereri vashandisi veGNOME desktop ine akawanda madhijimendi avo vaungade kuti zvemukati zvako zvienderane.
2 Nzira yekuwana nekuisa Bonsai?
Bonsai inosanganisira iyo bonsaid kumashure maitiro uye libbonsai ficha raibhurari kupa sevhisi-senge masevhisi.
Iyo yekumashure maitiro anogona kutangwa pane chikuru nzvimbo yekushandira kana pane mini komputa Raspberry Pi inogara yakabatana kune isina waya netiweki uye kune yekuchengetedza data chishandiso chinoshanda zvachose mumusha network.
Iyo raibhurari inoshandiswa kugadzira GNOME kunyorera kuwana Bonsai masevhisi uchishandisa yakakwira-chikamu API.
Kutaurirana nemidziyo yekunze (mamwe maPC, malaptop, mafoni, Internet yezvinhu zvishandiso), iyo bonsai-pair yekushandisa inokurudzirwa, iyo inobvumidza kugadzira chiratidzo kubatanidza kune masevhisi. Mushure mekusunga, yakavharidzirwa chiteshi (TLS) inorongwa kuwana masevhisi uchishandisa serialized D-Bhazi zvikumbiro.
Bonsai haisi kungogumira kugovana dhata y inogona zvakare kushandiswa kugadzira zvinhu zvinowanikwa kune akawanda masisitimu nerutsigiro rwekuenzanisira kusarongeka pakati pemidziyo, kutengeserana, masekisheni echipiri, marescurs, uye kugona kuisa shanduko dzenzvimbo kune yega sisitimu pamusoro peyakajairika dhatabhesi.
Kuchengetwa kwezvinhu zvakajairika inoenderana neGVariant API uye LMDB.
Zvirongwa zviri nani kwazvo kana vachikwanisa kutaura pakati pezvigadzirwa. Naizvozvo, raibhurari yeData-Yekuwana-Chinhu, inonyatsodanwa zita rekuti libbonsai-dao, inopa inochengeterwa chinhu chinochengeterwa zvichibva paGVariant neLMDB.
Inotsigira ekutanga uye echipiri indexes, queries, cursors, transaction, uye kuwedzera kwekuenderana pakati pemidziyo. Iine kugona kushandura shanduko dzemuno pamusoro pekuchinja kwakatorwa kubva kune yekutanga Bonsai chishandiso.
Parizvino, chete sevhisi inopihwa kuwana faira rekuchengetedza, asi mune ramangwana zvakarongwa kuita mamwe masevhisi kuti uwane mail, karenda kuronga, zvinyorwa (zvichimirira mabasa), mapikicha maalbum, mimhanzi uye mavhidhiyo kuunganidzwa, yekutsvaga system, backup, VPN nezvimwe.
Semuenzaniso, uchishandisa Bonsai pamakomputa akasiyana muGnome kunyorera, unogona kuronga basa neyakaenderana kendari kuronga kana yakajairwa muunganidzwa wemifananidzo.
Zvakares Christian Hergert akataura kuti sevhisi parizvino haina kuchengetedzeka, asi ichashanda pakubhururuka kuti ikwanise kusarudzika mafomu uye nekuvandudza chikamu ichi kuita kuti sevhisi ive yakachengeteka.
Kunyanya, isu tinofanirwa kupa vanogadzira maturusi makuru ekuvaka maapplication ayo natively anotsigira chishandiso syncing.
Zvandakavaka kuyedza nezvose izvi Bonsai. Iko kuyedza kukuru padanho rino, asi kuri kunakidza zvakakwana kuti ushandirane nevamwe vanoda kujoina ini.
Nzira yekuwana nekuisa Bonsai?
Nezve chirongwa, kune avo vanofarira kuziva kuti zvinoshanda sei, Kuchiyedza kana kutarisa kwayanobva kodhi, iwe unofanirwa kuziva kuti iyo kodhi yeprojekiti yakanyorwa muC uye inouya pasi peGPLv3 rezinesi. Izvi zvinogona kuwanikwa kubva kuGitlab Mune inotevera chinongedzo.
Kuvakwa kwepakeji kunogona kuitwa nerubatsiro rwaMeson.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve sevhisi iyi, unogona kutarisa iro rekutanga bhuku mu inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Bonsai yeGnome-centric yakawanda-chishandiso sync basa